मुलुक कसरी चलाउने ? पृथ्वीनारायणका दिब्योपदेश पढे पुग्छ !
Friday, 11 Jan, 2019 9:10 AM
२७ पुस, काठमाडौं । नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको सम्झना हरेक नेपालीको मनमा छ । यो देशको स्वाधिनता कसरी जोगाउने, अखण्डता कसरी कायम गर्ने र देशको विकास कसरी हुन्छ । आज पनि नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा यिनै विषय छन् । यही मुलमन्त्रलाई बुझ्न नसक्दा दुईतिहाईको सरकार बन्दा पनि नेपालमा स्थिरताको लक्षण देखिएको छैन । मुलुकको शासन कसरी चलाउने भनि उनले दिएको विचारलाई अहिलेको नेतृत्वले बुझ्न सक्यो भने हाम्रा धेरै समस्याको हल एकैपटक हुन्छ ।
जुनसुकै देशको परराष्ट्र नीतिका तीनवटा लक्ष्य हुन्छन् । पहिलो– देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अखण्डताको रक्षा गर्ने । दोस्रो– आर्थिक, सामाजिक विकास र तेस्रो– विदेशी हस्तक्षेप एवं घुसपैठबाट बच्ने । ठूला शक्ति राष्ट्रहरुले कमजोर देशभित्र हस्तक्षेप गर्छन् । सानाले त्यो हस्तक्षेपलाई रोक्ने प्रयास गर्छन् । पृथ्वीनारायण शाहको परराष्ट्र नीतिलाई यसैको आलोकमा हेरिनुपर्छ । उनको परराष्ट्र नीतिमा पाँच वटा मुख्य तत्व देखिन्छन् । उनको परराष्ट्रनीतिको लक्ष्य पनि नेपालको सुरक्षा नै हो ।
हिमालयको काखमा एउटा हिन्दूराष्ट्र निर्माण गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित राख्ने उनको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख लक्ष्य देखिन्छ । त्यसैकारण उनले नेपाल एकीकरण गरे । किनभने, जनतामा एकता नभइकन सुरक्षा हुँदैन भन्ने उनलाई थाहा थियो । भारतमा त्यो प्रष्ट देखेका थिए । १९ वर्षको उमेरमा उनी राजा बने । २० वर्षको उमेरमा हतियार किन्न बनारसको यात्रामा गए । गोरखाको राजपाठ आफ्नी आमा र कालु पाण्डेलाई जिम्मा लगाएर बनारस गएका थिए । बनारस जाँदा उनले हतियार मात्रै किनेनन, बिहे पनि गरे । आफ्नो गोत्र बदले ।
त्यतिबेला गंगाजीको दायाँ–बायाँ रहेका हालको उत्तर भारतका राजा, रजौटाहरुको अवस्था कमजोर थियो । तिनीहरुलाई अंग्रेजहरुले कपाकप खाँदै जाने सम्भावना पृथ्वीनारायण शाहले देखे । नेपालमा बाइसे र चौबीसेलगायत काठमाडौं उपत्यका र पूर्वका किराँत राज्यहरु समेत एक भएन भने अंग्रेजले त्यसैगरी खान्छ भन्ने उनले देखे । र, नेपाल एकीकरण नै उनको परराष्ट्र नीतिको पहिलो तत्व हो ।
दोस्रो तत्व हो, त्यो एकीकरणका लागि आवश्यक कुटनीति र राजनीति । त्यही उनले गरे । काठमाडौं र नुवाकोटतर्फ लडाईं शुरु गर्नुअघि उनले बाइसे, चौबीसे सबै राजाहरुकहाँ आफ्ना दूत पठाए । लमजुङ, तनहुँ, कास्की, पर्वत, पाल्पा, रुकुम, सल्यान सबैतिर दूत पठाए । काठमाडौंमा समेत पठाइएका छन् । उनले सबैलाई कूटनीतिक र राजनीतिक तवरले सहमत गर्ने कोशिस गरे, ‘हामी एक भएनौं भने अंग्रेजको दास हुनेछौं । एक हुने कि नहुने ? हेर्नुस, तराईभन्दा पारि भारतमा के भइरहेको छ ?’
उनले भनेका छन् , ‘डोला पनि ल्याउँ, मकवानपुरसँग कुरा पनि गरौं भनेर गयौं तर कुरा मिलेन । त्यसपछि मैले नौलाखे हीरा र एकदन्त हात्ती दिन्छौ भने डोला पनि लैजान्छु र दिँदैनौ भने फर्केर जान्छु भनेर निहुँ झिकेँ ।’
तेस्रो, उनको परराष्ट्रनीतिको तत्व हो, सेना । यदि राजनीति र कूटनीतिले काम गरेन भने सेना प्रयोग गर्ने । त्यतिबेला उनीसँग १५–१६ सय सैनिक थिए होलान् । गोर्खामा १२ हजार घरधुरी थिए । ती धुरीबाट १–१ जना लडाका मागेर लडाईं थालिएको थियो । त्यतिबेला न बर्दी थियो, न त कवाज हुन्थ्यो ।
पृथ्वीनारायण शाहको परराष्ट्र नीतिको चौथो तत्व हो प्रतिरक्षात्मक लडाईं । दिव्योपदेशमा उनले भनेका छन, ‘जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु ।’ यसको अर्थ हो, आफैं निहुँ खोजेर जाइनलाग्नु तर निहुँ खोज्न आउनेलाई त्यसै नछोड्नु ।
पृथ्वीनारायण शाहले अपनाएको परराष्ट्र नीतिलाई नै जंंगबहादुर राणा, भीमसेन थापा, राजा महेन्द्रले पछ्याएको देखिन्छ । किनभने, परराष्ट्र नीतिको पहिलो निर्धारक तत्व भनेको भूगोल हो । अरु चिज बदलिन सक्छ, भूगोल बदलिँदैन । यही भूगोलका आधारमा पृथ्वीनारायण शाहले ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो’ भनेका थिए, जुन आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
सिक्किममा अंग्रेजको पनि नियन्त्रण थियो । त्यतातिरको बाटो बन्द गरेर यताबाट व्यापार ग¥यो भने कर उठ्छ र हामी सम्पन्न हुन्छौं भन्ने उनको विश्वास हो ।
‘हिन्दूस्तानमा विद्रोह भयो भने अंग्रेज फौज किल्ला खोज्दै आउन्या छन’ भनेर उनले भनेका छन् । किनभने, हिन्दूस्तानमा विद्रोह भयो भने सुरक्षाका लागि अंग्रेजहरु पहाडतिर स्वाभाविकै हुन्थ्यो । ‘आयो भने चुरेमा खुबै काटिन्या छ, ५–७ पुस्तालाई खजाना पनि मिल्न्याछ’ भन्नुको तात्पर्य हो, अंग्रेजहरु आए भने चुरेमा काट्छौं र ५–७ पुस्तालाई पुग्ने गरी हतियार खोस्छौं ।
उनले भनेका छन, विदेशका साहु–महाजनलाई गौर, पर्साहा (पर्सा) देखि उँभो आउन नदिनु, आया भन्या मुलुक कंगाल गरी छाड्न्या छन् ।’
यस्तै, अर्को ठाउँमा भनेका छन, ‘आफ्ना देशका कपडा बुन्न जान्यालाई नमूना देखाई कपडा बुन्न सिकाउनु । आफ्ना देशका कपडा लाउनु । विदेशका कपडा लाउन मनाही गरिदिनु ।’ भन्नुको तात्पर्य, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिनु र विदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नु । यो आजका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
‘गह्रो बन्या जग्गामा घर भया घर सारी गह्रो बनाउनु’ भनेका छन् । यसको अर्थ हो, घर भएको जग्गा खेतियोग्य छ भने भिरालोमा घर सारेर त्यहाँ खेति गर्नु । यसैगरी, ‘खानी भयाका जग्गामा गाउँ भया गाउँ सारी खानी खन्नु’ भनेका छन् । यसको अर्थ कुनै गाउँको जग्गामा खानी भेटियो भने गाउँ अन्यत्र सारेर भए पनि खानी निकाल्नु भन्ने हो । यो पनि समृद्धिको एउटा ‘प्रेस्क्रिप्सन’ हो ।
‘आफ्ना देशको जडिबुटी विदेश लगी बेच्नु र नगद खैंचनु’ भनेका छन् । जसको अर्थ हो, स्वदेशका जडिबुटी विदेशमा बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु । ‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ’ भन्ने उनको नीति थियो । अर्थात, जनता सम्पन्न भए मात्र सरकार पनि बलियो हुन्छ । यदि जनता तन्नम भने उनीहरुले सरकारको विरुद्ध विद्रोह गर्न सक्छन् भन्ने उनको राय थियो ।
कर उठाउने ठेक्का कसैलाई नदिएर सरकार आफैंले उठाउनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो । यदि कसैलाई वर्षमा १५ सय रुपैयाँ उठाएर ल्याऊ भन्यो भने उसले जनतालाई निचोर्छ । जनता निचोरिन थालेपछि सरकारप्रति विद्रोही हुन्छन् । जनतालाई ‘एक्सप्लोइट’ गर्नु हुँदैन । प्रत्येक गाउँमा सरकारकै मान्छे पठाएर सरकारले तोकेबमोजिम मात्रै ट्याक्स लिनु भनेका छन, उनले ।
एक ठाउँमा उनले भनेका छन, ‘मलाई एउटा कुराको सन्देह (डर) लागिरह्या छ । नगिचैै हिन्दूस्तान रह्या छ । त्यहाँ छोकडा पात्रिया (उरन्ठेउला नर्तक नर्तकीहरु) छन् । राजामहाराजको नाचगानमा बडो मोह हुन्छ । उनीहरु ती पात्रियाको नाचगानमा भुल्लान् । मुजुरा बजाएर तिनका नाच हेर्न थाल्यो भने राज्य डुब्छ । नाचगान हेर्ने मनसुवा भया तीन शहर नेपालको नेवारहरुको नाच झिकाएर हेर्या हुन्छ । यिनलाई दियाको पनि आफ्नै देशमा रहन्छ ।’
हिन्दूस्तानतिरबाट आएका नर्तक–नर्तकीलाई बक्सिस दिनुभन्दा यहीँका नेवारहरुलाई दिँदा आप्mनो देशको पैसा बाहिर जाँदैन भन्ने उनको अभिव्यक्तिको आशय हो । पृथ्वीनारायण शाहका यि महान विचार हाम्रा लागि मार्गदर्शक हुन । उनी दूरद्रष्टा थिए । आज पनि नेपाली राजनीतिले उनको सोचलाई पक्रन सकेको छैन ।